Common Updater app Problems – Xiaomi Guide
Updater ကနေ update လုပ်ရင် ကြုံလေ့ရှိတဲ့ အရာလေးတွေပါ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်နိုင်လဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်လဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်မှပဲအဆင်ပြေတော့မလဲ.. စသည်တို့ကို Knowledge အနေနဲ့ သိထားရအောင်ပါ။
Updater ကနေ update process စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ အင်တာနက် connection ရှိနေရပါမယ်။ ROM Update ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Verification, Decryption တွေလုပ်ဖို့ WiFi ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mobile Data ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိနေဖို့လိုပါမယ်။ WiFi ဆိုရင်တော့ သိပ်အရေးမကြီးလှပါ။ Mobile Data ဆိုရင် China ROM တွေမှာ Download app ရဲ့ Settings မှာ Download file size က 1MB, 2MB လုပ်ထားတာမျိုးတွေရှိနေလို့မရပါဘူး။ Update က file size ကြီးလေ့ရှိတာမို့ Unlimited ထားပေးထားရင်အကောင်းဆုံးပါ။ နောက်တစ်ခုက တော်တော်များများ ကလိထားလေ့ရှိတဲ့ Data Restrict ပါ။ Update process မှာပါဝင်တဲ့ Updater app, Downloads app, Download Manager apps တို့ဟာ Data Restrict ထဲမှာ ကန့်သတ်ထားတာတွေလုပ်ထားရင် ပြန်စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်တာကိုဖွင့်ပေးပါ။
OTA Update ကို download လုပ်လိုက်တယ်။ အဲသည် file ကို လိုတာတွေစစ်ဆေးပြီး Decryption လုပ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Reboot ပါတယ်။ ဒါပုံမှန်ပါ။ အချို့က reboot မလုပ်ပဲ အဲသည် OTA Update zip ကို ကူးထားတယ်။ နောက်တစ်လုံးမှာ သွား update တယ်ဆိုတာမျိုးတွေ မရပါလို့ Xiaomi Global Forum မှာ ဆိုထားပါတယ်။ Decryption လုပ်ပြိးသား OTA Zip ကို နောက်တစ်လုံးမှာ တင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေ အဆင်မပြေတတ်ပါ။ Full ROM zip တွေဆိုရင်တော့ အရေးမကြီးပါ။ ဘယ်လိုသုံးသုံးရပါတယ်။
Full ROM zip ဒေါင်းပြီး တင်တာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ Xiaomi Forum ထဲက Download page မှာသာ သွားပြီး download လုပ်ပါ။
ဖုန်း Internal Storage ထဲမှာ Free Space လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါစေ။ 2GB လောက်ရှိတယ်ဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ အချို့ Update တွေက 1GB ကျော်ကျော်တွေရှိတတ်ပါတယ်။
ဖုန်း Battery အား များများရှိနေပါစေ။ 50% ကျော်ကျော်ရှိရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
Can’t Verify Update..
No 1: It’s not allowed to upgrade to unofficial ROM package.
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ – Decrypting လုပ်ပြီးသား OTA ကို အခြားသူဆီက share ယူလားပြီး flash တာ၊ မိမိဖုန်းအတွက် rom မဟုတ်တာကို သွင်းခိုင်းတာ၊ Download ထားတဲ့ rom zip file က လိုအပ်တဲ့ size အပြည့်မဖြစ်တာမျိုးတွေကြောင့်ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ IDM လို Download Manager မျိုးနဲ့ဒေါင်းတာတွေက သတ်မှတ် size အတိုင်း error ကင်းကင်းနဲ့ရတာများပါတယ်။ ဖုန်း browser၊ ကွန်ပျူတာ browser လိုမျိုး browser ထဲကဒေါင်းတာမျိုးတွေက တစ်ခါတရံ size အကုန်မပြီးပဲ download ပြီးပြီ။ file size က original အတိုင်းပဲဆိုပြီးဆိုတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲလို zip မျိုးဆို error တက်မှာပါ။
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ – ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် Full rom zip ကိုသာ Xiaomi Official Download page ကနေပြန်ဒေါင်းပြီးသွင်းပါ။ Updater app ထဲမှာ ညာဖက်အပေါ်ထောင့်လေးက အစက်လေးသုံးစက်နှိပ်ပြီး Download update ဆိုတာနှိပ်ဒေါင်းပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းက China Stable တင်ထားတယ်ဆို China Stable နောက်ဆုံး Version ရလာပါမယ်။ Updater app ထဲကဒေါင်းတာမို့ Xiaomi Official Site ကဟာဆိုတာ ယုံကြည်လို့ရပါပြီ။
No. 2: You’re allow to flash the newest/latest Stable Version published by MIUI forum from developer Version Only
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ – China Stable rom ကနေ China Developer rom ပြောင်းတာ၊ China Developer rom ကနေ China Stable rom ကိုပြန်ချိန်းတာ.. (Global ဖက်မှာလဲ ထိုနည်းတူပေါ့)။ ကိုယ်တင်ချင်တာက နောက်ဆုံး Update version မဟုတ်လို့ပါလို့ Xiaomi Forum ကဆိုထားပါတယ်။
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ – နောက်ဆုံး Update version rom zip ကိုသာဒေါင်းပြီးတင်ပါ။ Developer ကနေ Stable ဖက်ကိုပြန်ချိန်းချင်ရင် Developer ကလဲ နောက်ဆုံးတင်ထားတာမျိုးဖြစ်နေရင် မရတတ်တာမျုးိတွေလဲရှိတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဆို Developer rom တွေက တစ်ပတ်တစ်ခါ ပုံမှန်ဆိုသလို Update ပေးသည်မို့ တစ်ပတ်လောက်မလုပ်ပဲထားပြီးမှ Stable ကိုပြောင်းကြည့်ပါ။
No. 3: Couldn’t Verify The Source Of This Update. Try Downloading it Again
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ – Xiaomi forum က Solution သည် VPN တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးမှ Update process ပြန်လုပ်တာပါပဲ။ အင်တာနက်ဖွင့်၊ Free VPN Software တစ်ခုခုလေးသုံးပြီး VPN ချိတ်၊ ရမှ Update ပြန်လုပ်တာကတော့ အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူး။ ကျနော်အကြံပြုလိုတာကလည်း အင်တာနက်လိုင်းကောင်း၊ file download လုပ်ရင် ကောင်းတဲ့ Operator မျိုးကိုသုံးပြီး Update process လုပ်တာ အဆင်ပြေမယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ Xiaomi Server တွေသည်လည်း China Network ထဲက၊ China ရဲ့ Internet censorship တွေကလည်း အများသိတဲ့အတိုင်းပဲလေ..။ သည်တော့ ရံဖန်ရံခါ အခုလိုဖြစ်တတ်သည်လို့ထင်ပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ်စောင့်ပြီးမှလုပ်ရင်လဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ VPN လို သုံးရင်လဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ Mobile ဆို Operator, Fixed line တွေဆို ISP ချိန်းသုံးရင်လဲ Backbone network AS တွေပြောင်းတတ်သည်မို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ – ဒါမျိုးကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ခွင့်မရှိတာကို လိုက်လုပ်ချင်တဲ့ လိုက်ပါချင်တဲ့ လူတွေသဘောလိုပါပဲ 😀 😀 ။ MIUI7to 8, 8 to9စတဲ့ Major version ပြောင်းချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တာတွေပါ။ Stable rom version တွေမလာခင် Beta version တွေလာပါတယ်။ အဲဒါတွေကို စမ်းသပ်သုံးဖို့ အဖွဲ့ဝင်ထားသူတွေ (Beta Team Member) တွေက Update ရပြီး သုံးကြပါတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေကို Feed Back ပေးကြပါတယ်။ လိုအပ်တာအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးမှ Public ကို Nightly Update အနေနဲ့ Random ရွေးပေးပါတယ်။ အဲသည်အဆင့်မှာ အကုန်အဆင်ပြေမှ All Public ကိုပေးပါတယ်။ အဲလို Beta Team Member တွေဆီက Leak ဖြစ်လာတဲ့ ROM တွေကို တင်မိရင် အခုလိုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ လူဆိုတာက သူများ MIUI9မရခင် ငါကရတယ်ဆိုတာမျိုး လုပ်ချင်ကြတော့ ရအောင် ဒေါင်း တင်တာ လုပ်ကြတယ်လေ.. 😀 😀
ဖြေရှင်းဖို့နည်းကတော့ – ကိုယ်က ဘာ Team Member မှဝင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ရင် မိမိဖုန်းမှာ Update ပေါ်လာသည်ထိသာစောင့်ပါ။ Boot loader unlock လုပ်..၊ TWRP Custom Recovery သွင်းထားသူမျိုးတွေကတော့ သည်လို စစ်ဆေးတွေအချက်တွေကြုံမှာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် ROM မှန်တယ်ဆို Flash နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ – ကိုယ့်ဖုန်းထဲက rom ရဲ့ Android version နဲ့ ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ rom က Android Version တို့မတူတာပါပဲ။ Full rom zip တွေဒေါင်းတင်သူတွေ ကြုံတာများပါတယ်။ Update ရတာကို တစ်ဆင့်ချင်းတင်နေသူတွေအဖို့ကတော့ ဒါမျိုးပြတာ မဖြစ်ပါ။
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ – အချို့ဖုန်း model တွေမှာ MIUI version လဲမြှင့်ရင် Android Version ပါ Update သွားတတ်တာတွေရှိပါတယ်။ Redmi Note3Pro, Redmi Note 4X, Redmi 4X .. စသည်တို့လိုပေါ့။ သည်တော့ ဥပမာဆိုရရင် ကိုယ်က MIUI 8.0 တင်ထားတယ်ပေါ့။ Android Version6ဆိုပါတော့။ Update လုပ်ချင်တယ်။ သူများတွေက MIUI 8.5 ရနေပြီ။ Android version ကလည်း7ဖြစ်နေပြီ။ ဒါကိုယ်ကိုင်ထားထားတဲ့ ဖုန်း Model မှာဖြစ်တာနော်..။ Mi ဖုန်းတိုင်းအဲလိုဖြစ်မှာ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ Xiaomi Download Page မှာလဲ 8.5 ကဒေါင်းလို့ရနေပြီမို့ တန်းဒေါင်းတင်လိုက်ရင် ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ။ MIUI Update ကဖုန်းမှာလုပ်ရင် တစ်ဆင့်ချင်းပဲသွားပါတယ်။ သည်တော့ ကိုယ့်ဖုန်း Model အတွက်က Android6နဲ့ MUI 8.4 မှာ ဆုံးပြီးမှ7နဲ့ 8.5 ဆက်သွားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်လက်ရှိအချိန်ဒေါင်းတင်နိုင်တာ Android6နဲ့ MIUI 8.4 ကိုပါ။ ပြီးမှ OTA Update ပဲဆက်သွားရင် သူ့ဟာသူ ဆက်မြင့်ကုန်မှာပါ။ တစ်ခါတည်းနဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်အောင် သိပ်တင်ချင်လွန်းသပဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး version Fastboot ROM ကိုဒေါင်းပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့သာတင်ပါ။ BLU ပြီးလို့ TWRP ရှိရင်လဲ TWRP ကပေါ့။
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ – ကိုယ်က China Stable တင်ထားတယ်။ ဒါကို Global ပြောင်းချင်လို့ Global Stable rom ဒေါင်းပြိးတင်မိတာမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ China ROM အမျိုးအစားကနေ Global ROM အမျိုးအစားကို Updater ကနေ rom zip တင်လို့မရပါ။
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ – Fastboot rom အမျိုးအစားကို ဒေါင်းပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့တင်ပါ။ Boot Loader Unlock ဖို့လိုလဲ လုပ်ပြီး ကွန်ပျူတာမှာ Mi Flash Tool နဲ့တင်ပါ။ EDL အလွယ် ဝင်လို့ရတဲ့ Model ဆို EDL ကနေတင်ပါ (BLU မလိုဘူးပေါ့)။ TWRP ရှိလို့ rom type ချိန်းချင်ရင် Full Wipe ပြီးတင်ပါ။ China ROM ကနေ Global Stable လိုမျိုးကို BLU မလုပ်ပဲ၊ EDL လဲဝင်မရရင် XiaomiTool နဲ့လဲ ချိန်းနိုင်ပါတယ်။ Updater ကနေပဲလုပ်လို့ရမယ့်နည်းတော့ မရှိပါ။
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ – Mobile data နဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ post အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ မိမိတို့ အမျိုးမျိုးကလိထားတဲ့ Data Restrict, Battery Management, Download app’s download file size တွေထဲမှာ Updater အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကို လိုက်လံစစ်ဆေးပြီးသာ ပြန်လုပ်ကြည့်ရုံပါ။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ WiFi ရအောင်သာ ချိတ်ပြီးလုပ်ပါ။
Viewing Change logs problem
ဒါမျိုးတွေကတော့ Xiaomi Server တွေ issue ပါ။ Change logs တွေအတွက် Under development ဖြစ်နေလို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ပါ။ မိမိလုပ်လို့ရတာ ဘာမှမရှိပါ။
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ – Xiaomi server တွေ issue ပါပဲ။ Feature အသစ်ပါတဲ့ update လို့ announce လုပ်ထားမိတာမျိုးဆို users တွေ အများကြီးက download ဆွဲကြပါတယ်။ အဲလိုမျိုးမှာ server တွေ busy ဖြစ်ပြီး ခုလို ဆွဲမရဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ – အချိန်းအနည်းငယ်စောင့်ပြိးမှ update တာလုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Xiaomi Download page ကနေ rom zip ဒေါင်းပြီး Updater ထဲမှာတင်မယ်လုပ်ရင် Download လုပ်လို့ error ဖြစ်နေပါမယ်။ ဒါပေမယ့် Download Task List ထဲမှာ ကြည့်ပြီး rom link ကို ပြင်ပေးလို့ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Download Task List ထဲမှာ download link က အခုလိုဆိုပါတော့။
အဲဒါကို အခုလိုလေးပြင်ထားလိုက်ပါ။ bigota ရှေ့မှာ o (အိုအသေး) ထည့်လိုက်တာပါ။
အဲလိုဆို rom zip ဒေါင်းလို့ရနိုင်ပါမယ်။ ပြီးမှ Updater ထဲကနေ Choose update package နဲ့တင်ပေါ့…။
ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ – TWRP ရှိနေလို့ OTA update လုပ်မိတာမျိုးပါ။ OTA လိုချင်လို့ TWRP ဖြုတ်ထားပေမယ့်လဲ system font ချိန်းတာလိုလုပ်ထားရင်၊ root ထားရင် system files တွေကို ချိန်းမိသလိုဖြစ်နေလို့ fail တတ်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းကတော့ – Xiaomi Forum download page မှာ မိမိတင်ချင်တဲ့ full rom zip version ကိုသာဒေါင်းပြီးတင်ပါ။ TWRP ရှိလဲ TWRP ထဲကပေါ့။ ဖြုတ်ထားလဲ Updater ကနေပေါ့။
ဆိုင်က အစကတည်းက official xiaomi rom မဟုတ်ပဲ Customized MIUI ROM တင်ပေးလိုက်တာမျိုးတွေပေါ့။ Finger Print စပါလာတဲ့ Redmi Note3MTK တွေစထွက်ချိန် ခဏ ခဏတွေ့ပါတယ်။ China re-seller တွေပြန်တင်ထားတာတွေပါ။ China rom only ပဲရှိတဲ့ model ကို Google တွေပါ တစ်ပါတည်းပါအောင်လုပ်ထားတာမျိုးတွေ…။ နောက်တစ်ခုက သူများတွေ Update ရတယ်ပြောလို့ ကိုယ်စစ်တယ်။ ကိုယ်က မရဘူး။ ဒါမျိုးက သူများရတာ Nightly Update ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Nightly ဆိုတာ လူတိုင်းမပေး၊ Random ပေးလို့ ကိုယ်ရချင်မှရမယ်လို့ မှတ်ယူထားပါ။ ပြီးရင် Developer rom လိုတင်သုံးနေသူတွေပေါ့။ သည်အပတ် အခြား model တွေရတယ်။ ငါတို့ model မရဆိုတာတွေက ကိုယ့် model update suspend ထားတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးကတော့ Xiaomi Forum မှာ Announcement တွေ လိုက်ဖတ်လေ့လာပါ။
အခုလောက်ဆိုရင် Updater နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အထာလေးတွေ သိသင့်သလောက်သိပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ MIUI နဲ့ Mi ဖုန်းတွေမှာပျော်မွေ့ရင်း….